SALAMO 65.1-12	F. 1 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 65.1-12	F. 1
MENDRIKA HO DERAINA ANDRIAMANITRA
Mamela heloka Andriamanitra (1-4). “Ho Anao”, teny miantefa manokana amin’Andriamanitra. Ny voady dia mariky ny fanoloran-tena fa tsy fomba hanerena an’Andriamanitra akory. Ny olona voavela heloka no olom-boafidy sy sambatra ary afaka miditra ny kianjany. Tao amin’i Jesoa Kristy no nifidianan’Andriamanitra ary nahatonga ny olona iray ho mpisorona ka ho afaka manantona sy misitraka tanteraka ny fanatrehany (Jaona 14.6; Efesiana 1.4-7; 1Petera 2.9).
Manjaka amin’izao rehetra izao Andriamanitra (5-8). Ny olom-boafidy, efa niaina ny famonjen’Andriamanitra, toy ny mpanao salamo, no afaka mahita ny “zava-mahatahotra ataon’Andriamanitra amin’ny fahamarinana”. Ny nataon’Andriamanitra tamin’Israely (namonjy) dia hainy tanterahana amin’izao rehetra izao. Manana fahefana amin’ny zava-boahary sy ny olombelona Izy. Fifaliana no ateraky ny heriny sy ny fahalebiazany.
Mamatsy Andriamanitra (9-12). Andriamanitra no mampiodina ny zava-boahary rehetra. Tsy nahary izao rehetra izao fotsiny Andriamanitra fa mbola mitohy mandrak’ankehitriny mandray andraikitra amin’ny fikarakarana ny firindrany sy ny fahavokarany. Mahatonga antsika tsy hanana ahiahy izany fa koa hifaly sy hihoby manoloana ny famindram-po sy fahalehibiazany. Fahamarinana: Mikarakara ny lafim-piainana rehetra Andriamanitra, na ny ara-batana (manome sakafo) izany na ny ara-panahy (mamonjy). Mampianatra antsika iankina tanteraka Aminy izany ary ho feno fisaorana sy fiderana Azy